के तपाईको घरमा साङ्लाले सताएको छ ? २ मिनेटमै यसरी भगाउनुस् – List Khabar
Home / समाचार / के तपाईको घरमा साङ्लाले सताएको छ ? २ मिनेटमै यसरी भगाउनुस्
admin August 17, 2021 समाचार Leaveacomment 88 Views
काठमाडौं । प्रायः भान्सा घरमा साङ्ला बढी आउने गर्छन् । साङ्लाबाट मानिसहरु आजित हुने गर्छन् । यिनीहरुलाई कसरी थपाउने होला भन्ने कुरामा उनीहरु धेरै जानकार हुँदैनन्।
बजारमा पाइने विषादीको प्रयोगले केही दिन साङ्ला भागे पनि त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । तर केही यस्ता घरेलु उपाय छन् जसबाट सहजै छुटकार पाउन सकिन्छ । यस्ता छन् घरेलु उपाय :
तेजपत्ताको प्रयोग : तेजपत्ताको बास्नाले साङ्ला भाग्ने गर्छन्। घरको जुन ठाउँमा बढी मात्रामा साङ्ला देखिन्छन्, त्यही ठाउँमा तेजपत्ताको धुलो राख्ने गरेमा यसको बास्नाले साङ्ला भाग्ने गर्छन्।
बेकिङ पाउडर र चिनी : यसको प्रयोगले पनि साङ्ला भाग्ने गर्छन् । एक कचौरामा धुलो पारिएको चिनी र बेकिङ पाउडरलाई बराबर मिलाएर साङ्ला आउने ठाउँमा राख्नुहोस् । चिनीको स्वादका कारण साङ्लाले त्यो धुलो खान्छ र बेकिङ पाउडरको गन्धले साङ्ला मर्ने गर्छन् ।
ल्वाङ : ल्वाङको गन्धले पनि साङ्ला भगाउन मद्दत गर्छ । ल्वाङको गन्धका कारण साङ्ला तुरुन्तै भाग्ने गर्छ।
बोरेक्स पाउडरको प्रयोग : साङ्ला बढी आउने ठाउँमा बोरेक्स पाउडर छर्नाले पनि साङ्ला चाँडै भाग्ने गर्छ । तर यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएको हुँदा बालबच्चालाई टाढै राखेर यसको प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ ।
मट्टितेलको प्रयोग : मट्टीतेलको प्रयोगले पनि साङ्ला भाग्ने गर्छन् । जहा बढी मात्रामा साङ्ला हुन्छन्, त्यस ठाउँमा मट्टीतेल छर्किनुभयो भने त्यसको गन्धले साङ्ला भाग्छन र मर्छन् पनि ।
रेड वाइन : भान्सा घरमा भएका साङ्ला भगाउनको लागि एउटा कचौरामा थोरै रेड वाइन राख्नुस् । यसको बास्नाले लुकेका साङ्लाहरु बाहिर निस्किनुका साथै भाग्ने र मर्ने गर्छन् ।
अण्डाको बोक्रो : अण्डाको बोक्रोको प्रयोगले पनि तपाइले साङ्लालाई धपाउन सक्नुहुन्छ । प्राय घरमा अण्डा प्रयोग भइरहन्छ।तर, अण्डाको बोक्रा यत्तिकै फ्याकिन्छ, यदि यसको सही प्रयोग गर्नुभयो भने साङ्ला धपाउन सकिन्छ।
अण्डाको बोक्रा कुनै कुनामा राखेमा त्यसबाट आउने स्मेलले पनि साङ्ला बाहिर निस्किने र भाग्ने गर्छन्।
Previous यी चार राशिका मानिसहरुमा हुन्छ अद्भुद शक्ति, कतै तपाईमा त छैन ?
Next सङ्क्रमणको जोखिम नघटेसम्म भदौ ७ गते राति १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरियो